Ny fifanarahana momba ny dia sy fizahan-tany dia nihena 17.4% tamin'ny volana aogositra 2021
Home » Lahatsoratra farany farany » Fitsangatsanganana an-trano » Ny fifanarahana momba ny dia sy fizahan-tany dia nihena 17.4% tamin'ny volana aogositra 2021
Airlines • Airport • Aviation • Vaovao Mafana Eoropeana • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Hospitality Industry • Hotels & Resorts • fampiasam-bola • Vaovao lafo vidy • Vaovao momba ny indostria fihaonana • Vaovao • People • fanorenana • Resorts • tompon'andraikitra • fiantsenana • Tourism • Fitaterana • Travel Wire News
Ny hetsika fifanarahana ambany dia azo lazaina ho nihena ny fahatsapana ny fifanarahana satria tsy azo antoka ny valin'ny areti-mifindra COVID-19.
Fifanarahana amin'ny fizahan-tany sy fizahan-tany 57 no nambara tamin'ny volana aogositra 2021.
Ny isan'ny fifanarahana nambara dia nampiseho fihenan'ny 17.4% nanomboka tamin'ny Jolay 2021.
Ny volana aogositra dia nanamarika ny volana faharoa nisesy ny fihenan'ny hetsika fifanarahana.
Fifampiraharahana 57 (ahitana mergers & acquisition [M&A], fananana manokana, ary famatsiam-bola) no nambara tamin'ny sehatry ny fizahan-tany sy fizahan-tany nandritra ny volana aogositra 2021, izay fihenan'ny 17.4% noho ny fifanarahana 69 nambara tamin'ny volana jolay, ireo manampahaizana momba ny angon-drakitra sy ny analytics.
Ny volana aogositra no manamarika ny volana faharoa nisesy ny fihenan'ny asa fifanarahana ho an'ny sehatry ny fizahan-tany sy fizahan-tany taorian'ny nanombohana ny volana jona. Ny hetsika fifanarahana ambany dia azo lazaina ho nihena ny fahatsapana ny fifanarahana satria tsy azo antoka ny valin'ny areti-mifindra COVID-19.
Ny karazana fifanarahana rehetra (eo ambanin'ny fandrakofana) dia nanatri-maso ny fihenan'ny hetsika fifampiraharahana tamin'ny volana Aogositra raha ampitahaina amin'ny volana teo aloha. Ny fanambarana ny famatsiam-bola, ny fananana manokana ary ny fampiroboroboana ary ny fifanarahana fahazoana dia nihena 4.3%, 20% ary 24.4% nandritra ny volana aogositra raha oharina tamin'ny volana teo aloha.
Ny hetsika fifanarahana dia nihena koa tamin'ny tsena lehibe toa ny USA, ny UK, India sy Aostralia nandritra ny volana aogositra raha oharina tamin'ny volana teo aloha, raha nanatri-maso ny fanatsarana ny hetsika fifanarahana kosa i Sina.